News Collection: करिश्माको २५ वर्ष : फ्लप कि हिट ?
करिश्माको २५ वर्ष : फ्लप कि हिट ?
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको सिनेमा करियर शनिबारदेखि २५ वर्ष पुगेको छ । डेब्यु सिनेमा ‘सन्तान’ रिलिजको आधारमा करिश्माको करियरले साढे दुई दशक पार गरेको हो । समिक्षकहरूबीच करिश्माको करियरलाई सफल वा असफल के भन्ने बारेमा विमती कायमै छ । करियरको यो कालखण्डमा करिश्माले अनेक उतारचढावहरू बेहोरिन् । अमेरिका पलायन हुनु करिश्मा करियरको सर्वाधिक कमजोर पक्ष बन्यो ।
करिश्माको करियरलाई एक वाक्यमा यसरी संश्लेषण गर्न सकिन्छ –‘उनी अभिनयले भन्दा पनि सौन्दर्यले हिट भइन् ।’ उनको अभिनय र नृत्य क्षमताभन्दा पनि उनको सौन्दर्यको चर्चा उत्तराद्र्धसम्म भैरहेको छ । लगभग उनका १५ जति सिनेमा हिट भए । नेपाल फर्किएपछि ‘कस्तुरी’बाट काम थालेकी उनका ‘मनकामना’, ‘ट्रक ड्राइभर’, ‘सपना’ सर्वाधिक हिट सिनेमा हुन् । राजेश हमालसँग उनले खेलेका ‘साथी’, ‘बसन्ती’, ‘गोठालो’, ‘जिन्दगानी’ हिट भए ।
‘कस्तुरी’ अभिनयताका उनले विनोद मानन्धरसँग विहे गरिन् । विहेपछि करिश्माको ख्याती बढ्दै गयो । उनकी गडमदर अञ्जली श्रेष्ठ विहेपछि करिश्मा झनै राम्री भएको र अभिनय खारिएको बताउँछिन् । उनको होमप्रोडक्सनमा बनेका दुई सिनेमा ‘ढुकढुकी’ र ‘बाबुसाहेव’ नराम्रोसँग फ्लप भए । पछिल्लोवर्ष मात्रै उनले दर्जन सिनेमामा अभिनय गरिन् । ती हुन् –‘मायाको बारीमा’, ‘पल’, ‘हो यही माया हो’, ‘किन किन’, ‘सायद’, ‘वरदान’ र ‘मायाज् बार’ ।
करिश्माको अवरुद्ध होमप्रोडक्सनले चाँडै टेलिभिजन र सिनेमाको काम सुरु गर्दैछ । लोडसेडिङ सकिएपछि दशकअघि रोकिएको टेलिफिल्म र विज्ञापनका काम सुचारु गरिने योजनामा छन् करिश्मा दम्पति । कम्पनीले सिनेमा निर्माण थाल्ने उनले बताइन् । तर, नेपाली सिनेमाको इतिहासले करिश्मालाई सँधै दक्ष अभिनेत्रीभन्दा सुन्दरी अभिनेत्रीको रुपमा मूल्यांकन गर्नेछ । उनीमाथि लागिरहेको आरोप के हो भने –फिजिकल मेन्टेनसामु उनको एक्टिङ गौण भयो ।